သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): May 2012
ကျွန်ုပ်နှင့် ထူးဆန်းသည့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်း
ကျွန်ုပ်သည် သုတေသနကျမ်းစာအတွက် သဲလွန်စ စာတိုပေစလေးများ ရှာဖွေဖတ်ရှုရန်အတွက် လန်ဒန်မြို့လယ်ရှိ နာမည်ကြီး ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်သို့သွားဖို့ ကျွန်ုပ်နေအိမ်နဲ့ အနီးဆုံး မြေအောက်ရထားဘူတာရုံဖြစ်သည့် ဟောင်းစလိုးဝက်စ်စတေရှင်သို့ ချီတက်လေ၏။ ကွန်ပျူတာနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများ ထည့်ထားသည့် ဘေးသိုင်းလွယ်အိပ်ကြီးလွယ်ကာ ခေါင်းငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်ဖြင့် စတိုင်လ်ကျကျ လမ်းလျှောက်သွားရာ ထို ဟောင်းစလိုးဝက်စ်စတေရှင် မြေအောက်ဘူတာရုံ အ၀င်ဝသို့ ရောက်သောအခါ မနီးမဝေးအရပ်မှ ထွက်ပေါ်သည့် "ဟိတ် ဟိတ် ဟိတ်" ဟူသော အသံကို ကြား၍ ဘေးနားတစ်လျှောက် မျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်ရာ အ၀တ်အစားကို မဟာဆန်ဆန်ဝတ်ဆင်ထားပြီး မျက်မှန်ထူထူ တပ်ဆင်ထားသည့် အသားညိုညို လူလတ်ပိုင်း မျက်နှာစိမ်း အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကျွန်ုပ်ဆီသို့ ဦးတည်လာနေသည်ကို အရှင်လတ်လတ်ကြီး တွေ့ရလေတော့၏။
မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ အလွန်ရှားပါးလှသော ကျွန်ုပ်အဖို့ ထိုကဲ့သို့ လာနှုတ်ဆက်ခံရသည်မှာ မကြုံဖူးသလောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအမျိုးသမီးသည် ကျွန်ုပ်ကို လူမှား၍သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်နောက်၌ ကပ်လိုက်လာသော လူတစ်ယောက်ယောက်ကိုသော်လည်းကောင်း နှုတ်ဆက်သည် ဖြစ်တန်ရာ၏ ဆိုပြီး ဟိုဟို ဒီဒီ ရှေ့နောက် ၀ဲယာ မျက်စိကစားကြည့်နေစဉ် "ဘာ ကြောင်ကြောင်တောင် ဖြစ်နေတာလဲ ယူ့ကို နှုတ်ဆက်တာ ယူ့ကို နှုတ်ဆက်နေတာ" ဟု ကျွန်ုပ်၏ မျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး လက်ညှိုးထိုးကာ ပြောနေသည်ကို တွေ့ရလေ၏။
"ခင်ဗျာမနေနဲ့။ ဒီက တုံးဖလားသူကြီးမင်း မဟုတ်လား။ လူမမှားလောက်ပါဘူးနော်"
"ဗျာမနေပါနဲ့။ အခု ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်ကို သွားမှာမဟုတ်လား"
"သူကြီးမင်း... ဘာတွေ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတာလဲ။ အချိန်သိပ်မရှိဘူး။ အလုပ်သွားရဦးမယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့။ နောက်မှ ဖုန်းဆက်မယ်"
"အမ်... ဘယ်လို ဘယ်လို..."
"ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးမှာသာ ပေးစမ်းပါ။ အိုက်တင်တွေ ခံနေရသေးတယ် "
လူတကာစုံတဲ့ ဘူတာရုံအတွင်း လူရှေ့သူရှေ့၌ ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်နာမည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ ဂုဏ်ထူးဝိသေသပုဒ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်သွားမည့် နေရာကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်လုပ်နေသည့် အလုပ်ကိုလည်းကောင်း ဒဲ့ဒိုးကြီး ဆော်ထဲ့လိုက်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို တွေ့ကာစ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာပင် အတောင်းခံလိုက်ရရာ ၀မ်းသာရမလို အံ့သြရမလို ရှက်ရမလို ကြောက်ရမလို ဂုဏ်ယူရမလို ကြည်နူးရမလို...အဲဒီလို မလို...မလိုတွေ ဖြစ်ပြီး အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်ကာ ၀၇၇၄၀.... စသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ မိုဘိုင်းနံပါတ်ကို တန်းပေးမိလေတော့၏။ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လည်း ဟိုနားက ယားယံလာသလို ဒီနားက ယားယံလာသလို ဖြစ်ကာ ခေါင်းကုတ်လိုက် ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာရာ ကုတ်လိုက်ဖြင့် မယ်မင်းကြီးမရှေ့မှောက်၌ ဟိုယောင် ဒီယောင် ယောင်တိယောင်န ဖြစ်နေလေတော့၏။ သို့သော် သူ့နံပါတ်ကိုကား ကျွန်ုပ်အား မပေးခဲ့ချေ။ ကျွန်ုပ်လဲ မတောင်းထားလိုက်မိပေ။
"ဒါနဲ့.. သူကြီးမင်းတက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်က ဟို....... တက္ကသိုလ် မဟုတ်လား။ သူကြီးမင်းရဲ့ ညီတော်မောင်တစ်ယောက်လဲ နိုင်ငံခြား ရောက်နေတယ် မဟုတ်လား"
ကျွန်ုပ် တကယ်ပင် ခေါင်းကြီးသွားလေ၏။ ဘာဖြစ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျွန်ုပ်အကြောင်းကို သူ အကုန်သိနေရပါလိမ့်။ ကျွန်ုပ် ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားကာ သူ့ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားမှ ဘေးတိုက် အနေအထားသို့ ပြောင်းလိုက်ရလေ၏။ မတော်သကာ ကျွန်ုပ်ရင်ဘတ်၌ ရှိသော မှဲ့စလွယ်ကို အ၀တ်အစားထိုးဖောက် မြင်သွားမှဖြင့် မှဲ့စလွယ်ပိုင်ရှင်က ဘာဖြစ်တတ်တယ် ညာဖြစ်တတ်တယ် ဟောပြောနေမှာ စိုးရိမ်နေရသေးသည်။ ဒီအမျိုးသမီးကတော့ မလွယ်ရေးချ မလွယ်။ မြန်မြန်နှုတ်ဆက်ပြီး လှစ်တာဘဲ ကောင်းမယ်ဟု စဉ်းစားမိပြီး...
"ကဲ..ကဲ.. ကျနော် သွားလိုက်ပါဦးမယ်။ စာကြည့်တိုက်ကို စောစောရောက်မှ အဆင်ပြေမှာမို့"
ဟု ပြောကာ ဘူတာရုံအတွင်းရှိ ဘယ်ရီယာကို အွိုင်စတာ ကဒ်ဖြင့် ပွတ်သပ် ဖြတ်ကျော်ပြီး ခြေလှမ်းကြဲကြဲဖြင့် ဘူတာပလက်ဖောင်းရှိရာသို့ ခပ်သုတ်သုတ် လှမ်းခဲ့လေ၏။ ထိုအခိုက် နောက်က ခြေသံ တရှပ်ရှပ်ကြား၍ လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ထိုအမျိုးသမီးပါ ကျွန်ုပ်နောက်က လိုက်ပါလာသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ အော်... ခက်ချေပြီကော။ အလုပ်သွားမယ်လဲ ပြောသေး။ နောက်တော်ပါးကလဲ ပါလာသေး။
"အေးလေ... အလုပ်က ရထားနဲ့ သွားရမှာလေ..."
ထိုအခိုက် မြို့ထဲသွားမည့် မြေအောက်ရထားကြီး ဆိုက်ကပ်လာလေရာ... ကဲ ကဲ ဒါဖြင့်လဲ ရထားလာနေပြီ.. လာ.. တက်ကြစို့ ဟု ကျွန်ုပ်က ပြောလေရာ ဟင့်အင်းးးး ဒို့က ယူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အရပ်ကို သွားမှာ... ဟု ဆိုကာ မြို့တွင်းမှ လာမည့် ရထားကို စောင့်ဆိုင်းရင်း မယ်မင်းကြီးမတစ်ယောက် ဘူတာရုံ ပလက်ဖောင်း၌ ကျန်ရစ်နေခဲ့လေတော့၏။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ဒီအမျိုးသမီး ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘာကြောင့်လဲ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ စသည်ဖြင့် စဉ်းစားခန်းဖွင့်ကာ ရထားပေါ်၌ အတွေးနယ်ချဲ့နေမိလေတော့၏။ ဧကန္တ ဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက် နဂါးနီနဲ့ ပတ်သက်ကောင်း ပတ်သက်နေရမယ်။
ထိုကဲ့သို့ ခဏတာ တွေ့ကြုံပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပင် ဖြစ်သွားလေ၏။ သို့သော် တစ်လခန့်အကြာ၌ တစ်ပတ်မှ တစ်ခါမြည်လေ့ရှိသော ကျွန်ုပ်မိုဘိုင်းလေး တဂွမ်ဂွမ် မြည်လေတော့၏။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ဖုန်းကို ဗြုန်းတိုင်း ကောက်ကိုင်မိလေ၏။
"သူကြီးမင်း... ဒို့ကို မှတ်မိလား.. ဟင်း ဟင်း ဟင်း"
အသံကြားလိုက်ကတည်းက အသားညိုညို မျက်မှန်ထူထူ မဟာဆန်ဆန် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို တန်းမြင်ယောင်မိလေ၏။
"မမှတ်မိစရာလား။ ဒီအသံကို ခွေးချီသွားတောင် မှတ်မိတယ်"
"ဘူမှ မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က တွေ့ခဲ့တဲ့ မယ်မင်းကြီးမ တစ်ယောက် မဟုတ်လား"
"ဟောတော့.... သူကြီးမင်းက မှတ်မိနေတယ်။ ဥာဏ်ကောင်းလိုက်တာ"
"ချီးကျူးမနေနဲ့ဦး။ သူကြီးမင်း ဖုန်းကွန်တက်လစ်တ်ထဲမှာ စုစုပေါင်း လက်ငါးချောင်း မပြည့်ဘူး။ ဒါကြောင့် အသံကြားတာနဲ့ တန်းပြီး မှန်းသိလိုက်တာ"
"အော်... အဲလိုလား။ ဒါနဲ့... ဒို့နာမည်ကို ယူ သိသလား။ မှန်းပြောကြည့်စမ်းပါဦး"
ဒီအမျိုးသမီးကတော့ လုပ်ပြီ။ ဘယ့်နှယ် ဟိုဟာ မှန်းခိုင်း ဒီဟာ မှန်းခိုင်းနဲ့။ ပြီးတော့ လူကိုလဲ သူကြီးမင်းခေါ်လိုက် ယူ ခေါ်လိုက်။ အခုလဲ ကြည့် သူ့နာမည်ကို မှန်းခိုင်းနေပြန်ပြီ။ ဒါနဲ့ဘဲ. အဲဒီနေ့က အကြောင်းအရာလေးကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိလိုက်သည်။ အဲဒီနေ့က ကျွန်ုပ် ခေါင်းဆောင်းမပါပါ။ ဘလက်ချောကလက်ကလေး ပါးစပ်ထဲ ငုံသွားသည်။ ချောကလက် ခပ်ခါးခါးလေးကို ၀ါးရင်း စဉ်းစားနေမိသည်မှာ.. ဒီနေ့ မိုးရွာရင်တော့ ဒုက္ခဘဲ။ ငါ့မှာ ခေါင်းဆောင်း မပါလာဘူး ဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခိုက် ထိုအမျိုးသမီးနဲ့ စတွေ့သည်။ ဒါဆို... ငါစဉ်းစားနေတာက မိုးအကြောင်း၊ ပြီးတော့ ပါးစပ်ထဲက ချောကလက် အရသာက ခပ်ခါးခါး။ ဆိုတော့ကာ... သူ့နာမည် မိုးခါး ဖြစ်ရမယ် ဟု တွက်ဆကြည့်ပြီး...
"မိုးခါး မဟုတ်လား" ဟု လှမ်းမေးလိုက်မိသည်။
"အဲဒီ မိုးခါးဆိုတဲ့ နာမည်က ဒို့ ညီမအရင်းရဲ့ နာမည်လေ။ ဒို့နာမည် မဟုတ်ဘူး။ ဒို့နာမည်က. xxxxxxxxxxxx"
" ဒါနဲ့.... သူကြီးမင်း... ရှေ့ နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင် အပြင်မှာ နေ့လည်စာသွားစားရအောင်။ နဂါးနီနဲ့ အတူ လာခဲ့ပါလား။ စတိန်း ဟိုက်စထရိက အင်ဒိယ ဘူဖေး အရမ်း ကောင်းတယ်။ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့"
ကျွန်ုပ်ထင်ထားတာ ကွက်တိ ဖြစ်နေလေသည်။ ဒီမယ်မင်းကြီးမ နဂါးနီနဲ့ ပတ်သက်ရမယ်လို့။ နဂါးနီဆိုသော သူငယ်ချင်းက သူနဲ့ ခင်သူတိုင်းကို သူနဲ့ ခင်သူတိုင်းရဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြတတ်လေသည်။ ယခုလဲ ထိုကဲ့သို့ သူပြောထား၍ ကျွန်ုပ်အကြောင်းကို ထိုအမျိုးသမီး တော်တော်များ သိထားလေသည် မဟုတ်ပါလား။
မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် အပြင်ထွက်စားကြမယ်ဆိုပြန်တော့လဲ ခပ်လန့်လန့်။ ကျွန်ုပ်သည် စာရေးသည့်အခါ၌ ခပ်သွက်သွက် ရေးလေ့ရှိသလောက် စကားပြောရာ၌မူ သ န ကွဲအောင် မပြောတတ်ချေ။ စကားအလွန်နည်း၍ သူစိမ်းတရံရှေ့၌ စကားပြောရမှာ အလွန်ဝန်လေးတတ်သူ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ထိုနေ့လည်စာစားမည့် နေ့၌ ဘာစကားတွေ ပြောရမည်နည်း။ ဘယ်လို စကားမျိုးဖြင့် တန်ဆာ ဆင်ရပါလိမ့်မည်နည်း။ အရေးသွက်သွက် အပြောခက်ခက်ပေတကား။
ချုံး၍ ဆိုရပါမူ ချိန်းထားသည့် နေ့၌ နဂါးနီက ကျွန်ုပ်အား ကားဖြင့် လာခေါ်လေ၏။ ထိုအင်ဒိယ ဘူဖေးဆိုင်သို့ နာရီဝက်ခန့် ကားမောင်းရလေ၏။ ဆိုင်သို့ရောက်သောအခါ အစားအသောက်များ မှာပြီး အတူတူ စားကြလေ၏။ အစားအသောက် စားခါစပင် ရှိသေး။ ထို မယ်မင်းကြီးမထံသို့ ဖုန်းတစ်ချက် ၀င်လာ၏။ အမေရိကားက ဖုန်းမို့ ခဏနော် ဟု ဆိုကာ စားရင်းပြော ပြောရင်းစားဖြင့် အချိန်ကြာလာသည်နဲ့အမျှ ဗိုက်ပြည့်လာသည့်တိုင် မယ်မင်းကြီးမ ဖုန်းပြောခြင်းအလုပ်မှာ စီးဆင်းကောင်းနေလျှက်ပင်။ ခဏအကြာတွင်... ဒီမှာ ဧည့်သည်တွေနဲ့ အတူ နေ့လည်စာ စားနေလို့ နောက်မှ ပြောမယ်နော်... ဟု ဆိုကာ အမေရိကားက ဖုန်းကို ချလိုက်လေ၏။ ထို့နောက် ပန်းကန်အတွင်းရှိ လက်ကျန် အင်ဒိယ အစားအစာတို့ကို ခပ်မြန်မြန် စားလေ၏။ ထိုစဉ် မယ်မင်းကြီးမ ဖုန်း ထမြည်လာပြန်လေ၏။ ဟာ.... သူငယ်ချင်းဆီက ဖုန်းဘဲ။ သူနဲ့ စကားပြောစရာ နဲနဲ ရှိသေးလို့ ခဏပြောလိုက်ဦးမယ်နော်... ဆိုပြီး တော်ကီပွါးပြန်လေ၏။
နေ့လည်စာစား ပိုက်ဆံတွေရှင်းပြီးသည်အထိ မယ်မင်းကြီးမနဲ့ ကျွန်ုပ် စကားကောင်းကောင်းမပြောရသေးပေ။ သူလဲ သူ့အလုပ်နဲ့ သူပေကိုး။ ထို့နောက် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နဂါးနီက... ကဲ ကဲ ပြန်ကြမယ်။ ငါလဲ တက္ကသိုလ်သွားပြီး စူပါဗိုက်ဆာနဲ့ တွေ့စရာရှိသေးတယ်။ သွားကြစို့ ဟု ဆိုကာ ကားရပ်ထားရာ နေရာသို့ အတူတူ လာခဲ့ကြလေ၏။ ထိုအချိန်ထိ မယ်မင်းကြီးက ဖုန်းပြောကောင်းနေတုန်း။ ကားပေါ်တက်ပြီးမှ ဖုန်းပြောခြင်းကို ရပ်နားလေ၏။ အင်း..... သူ ဖုန်းပြော နားနေတုန်း အလ္လာပသလ္လာပ စကားလေး ပြောဦးမှဘဲ ဆိုပြီး....
"ကျနော်က အင်ဒိယစားသောက်ဆိုင်ကို ရောက်ဖူးတာ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်ဘဲ။ အစားအသောက်ကလဲ မဆိုးပါဘူး။ အင်ဒိယအစားအစာကို မကြိုက်ပေမဲ့ ဒီဆိုင်ကတော့ စားလို့ကောင်းသားဘဲ။ အခုလို ဖိတ်ခေါ်ကျွေးတဲ့ အတွက် ကျေး........"
"ကလင် ကလင် ကလင်..."
ကျွန်ုပ်၏ ကျေးဇူးတင်စကားပင် မဆုံးလိုက်သေး။ မယ်မင်းကြီးမရဲ့ ဖုန်း ထမြည်လာပြန်၏။
"ဟယ်... မာမီ....( သူကြီးမင်း ခဏလေးနော်။ မြန်မာနိုင်ငံက မာမီဆီက ဖုန်းဝင်လာလို့)။ မာမီ နေကောင်းလား။ ဘာ ခေါင်းနဲနဲ မူးနေတယ်။ ဆေးခန်းမသွားဘူးလား။ သားတော်မောင်ကကော ဂရုမစိုက်ဘူးလား။ အပြင်မှာ အရမ်းပူနေတယ်။ အပြင်မထွက်နဲ့လို့ ပြောတာလဲ နားမထောင်ဘူး။ အရမ်းနေမကောင်းရင် ဟို ဒေါက်တာနဲ့ သွားပြလေ။ သမီး ဒီကနေ ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်မယ်။ ဘာ.... မိုးအရမ်းချုပ်နေလို့ မသွားတော့ဘူး ဟုတ်လား။ ဘာမှ အားနာမနေပါနဲ့။ အဲဒီ ဆရာဝန်က အရမ်းသဘောကောင်းတယ်။ ကျန်းမာရေးက ပိုအရေးကြီးတယ်။ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြပါ။ သမီးလား။ သမီးလဲ ရှေ့ နှစ်လလောက်ဆို မြန်မာပြည် ပြန်လာမှာ။ သမီးက နေကောင်းပါတယ်။ သမီးအတွက် ဘာမှ မပူနဲ့။ မာမီသာ နေကောင်းအောင်နေ။ ဘယ့်နှယ် နေပူပူကြီး အပြင်ထွက် ဈေးဝယ်ရတယ်လို့"
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နဂါးနီကလဲ ကားကို တ၀ှူးဝှူးမောင်း.. မယ်မင်းကြီးမကလဲ ဖုန်းကို တတွတ်တွတ်ပြော.. ကျွန်ုပ်သည်လည်း အင်ဒိယအစားအစာစားထားသည့်အတွက် အိပ်ငိုက်ချင်ချင်။
"မာမီ... ဒါနဲ့... အိမ်ရှေ့က ပန်းပင်လေးတွေကိုရော ရေလောင်းပေးရဲ့လား။ အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ဂျက်ကီလေးကော နေကောင်းရဲ့လား။ လျှပ်စစ်မီးတွေကော ပုံမှန်လာရဲ့လား။ တူတော်မောင်လေးကော အဆင်ပြေရဲ့လား......" စသဖြင့် အိမ်မှာ မွေးထားသည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပါမကျန် လူတိုင်းစေ့အကြောင်း သတင်းမေးမြန်း၍မဆုံး ဖြစ်နေလေတော့၏။ ထိုအခိုက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကားကလေးသည် ကျွန်ုပ်နေအိမ် လမ်းထိပ်သို့ ရောက်လာလေ၏။
"ကဲ... နဂါးနီရေ.... ငါကတော့ ဒီမှာဘဲ ဆင်းတော့မယ်။ မင်းတို့က တက္ကသိုလ်ဘက် ဆက်သွားဦးမှာဆိုတော့ ငါ့ကို အိမ်အထိ လိုက်ပို့မနေနဲ့တော့ နောက်ကျနေလိမ့်မယ်။ ငါ ဒီမှာဘဲ ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တော့မယ်" ဟုဆိုကာ လမ်းထိပ်၌ ကားရပ်ခိုင်းကာ ကားပေါ်မှဆင်းပြီး သူတို့ကို နှုတ်ဆက်ဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်လေ၏။ မယ်မင်းကြီးမလဲ ဖုန်းတစ်ဘက်နဲ့.....
"သူကြီးမင်း... ကျေးဇူးနော်။ အခုလို တကူးတက လာပြီး နေ့လည်စာ လာအားပေးလို့။ နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး တွေ့မယ်နော်။ တာ့တာနော်။။ မာမီ... ပြောတော့.. ရပြီ။ အသိတစ်ယောက်ကို နှုတ်ဆက်နေတာ။ အင်း.. သမီးပြန်လာရင် မာမီ့အတွက် ဆေးဗူးတွေ ၀ယ်လာမယ်.........."
ထိုအခိုက် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နဂါးနီတစ်ယောက် ကားတံခါးကို ဂျုန်းကလဲ ပိတ်ကာ မောင်းထွက်သွားလေတော့၏။ ကားပေါ်၌မူ မယ်မင်းကြီးမတစ်ယောက် ဖုန်းပြော မပြတ်သေးပေ။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း အင်ဒိယအစားအစာများဖြင့် ပြည့်ဖောင်းလာသည့် ဗိုက်မို့မို့ကလေးကို လက်ကလေးဖြင့် အထက်အောက် ပွတ်သပ်ပြီး.... အင်း.. မဆိုးပေဘူးဘဲ။ စကားတစ်လုံးမှ ကောင်းကောင်း မပြောခဲ့ရဘဲ နေ့လည်စာလဲ အ၀တီးခဲ့ရတယ်။ ကျေးဇူးလဲ အတင်ခံလိုက်ရသေးတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့.. သူ့ဖုန်းတွေ တဂွမ်ဂွမ်လာနေလို့။ နို့မို့ဆို သူ့ကို ဘာခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘာစကားတွေ ပြောရမှန်း မသိဘူး။ ပြီးတော့ နေ့လည်စာကိုလဲ ကောင်းကောင်း စားလို့ရခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ အိုကေမှာ စိုပြေလို့... ဟု စဉ်းစားကာ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ပြုံးတုံးတုံးဖြင့် ကျွန်ုပ်နေအိမ်သို့ လမ်းလျှောက် ပြန်ခဲ့လေတော့၏။ မယ်မင်းကြီးမတစ်ယောက်မူကား မည်သို့မည်ပုံတွေးပြီး မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်နေမည်ကိုကား မယ်မင်းကြီးမ ကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံးဖြစ်ပေတော့မည်တည်း။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:47 23 comments:
ငါလျှင် မြိုက်၍ ရှိုက်တော့သည်။
ငါလျှင် ထိတ်၍ မှိတ်တော့သည်။
ငါလျှင် ကြိုက်၍ မိုက်တော့သည်။
[ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ရာသီဥတု ပူလွန်းလို့ ကြီးတောင့် ကြီးမားနဲ့ မင်းဧရာလို နုကြည့်မိတား) ]
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:42 16 comments:
မနက်အလုပ်ရှိရင် ညဘက် ခဏလေးဆိုပြီး မကြည့်ပါနဲ့
ဒီလ ဒီရက်တွေအတွင်း စိတ်နဲနဲ ပင်ပန်းနေတာကတစ်ကြောင်း၊ စိတ်ညစ်ညူးနေတာက တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် စိတ်ပြေလက်ပျောက် အားရပါးရ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရယ်မောဖွယ်ရာများကို ရှာဖွေရင်း ယူကျုဖိုင်တွေထဲက တကယ့်ကွင်းဆင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ဟာသလဲဖြစ် လူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကိုလဲ ဖော်ပြနေတဲ့ ဟာသဖိုင်တွေကို တွေ့ရှိပြီး ရယ်မဆုံး ပြုံးမဆုံး ဖြစ်မိပါတော့တယ်။ စိတ်ညစ်ညူးလို့ ဟာသဖိုင်တွေကိုကြည့်၊ ဟာသဖိုင်တွေကို ကြည့်ရင်း နှစ်ညသုံးညလောက် မိုးလင်းခါနီးထိ အဆက်မဖြတ်နိုင်လို့ ကြည့်မိတဲ့အတွက် အိပ်ရေးတွေပျက်၊ အိပ်ရေးတွေပျက်လို့ စိတ်ထပ်ညစ်ညူး။ အဲဒီလို အဲဒီလို အဲဒီလောက် အဲဒီလောက် ရယ်မောရတဲ့ ယူကျုက ဟာသဖိုင်တွေကို ဘလော့မိတ်ဆွေများ အပန်းပြေနိုင်စေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ဖူးသူများလဲ ထပ်ကြည့်ရင် ထပ်ရယ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ထပ်ကြည့်ကြပါလို့။ ရွှေမြန်မာက မိတ်ဆွေများကတော့ ကွန်မကောင်းလို့ ငါးဖမ်းရချင်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ရယ်စရာတွေမို့ မကြည့်ရလဲ ရယ်မောပေးကြပါလို့။း)
ဒီဟာသ ဖိုင်တွေကို ကြည့်ရင်း သူတို့တစ်တွေရဲ့ စိတ်တွေကို လိုက်ဖတ်နေမိတယ်။ ဘာတွေ တွေ့ရသလဲဆိုတော့ စာနာထောက်ထားမှုတွေ တွေ့ရတယ်။ တာဝန်ပေးထားတဲ့အခါ တာဝန်ယူမှုတွေကို တွေ့ရတယ်။ ကူညီလိုတဲ့ စိတ်ထားတွေကို တွေ့ရတယ်။ စနောက်တာကို စနောက်မှန်း သိတဲ့အခါ စိတ်ဆိုးဒေါသ မရှိကြတာကို တွေ့ရတယ်။ သနားညှာတာမှုတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒီထက် ပိုဖတ်တတ်ရင် ဒီထက်ပိုကြည်နူးမှုတွေ ပိုရနိုင်တယ်။
လောကထဲက သဘာဝ၊ သဘာဝထဲက ဟာသ၊ ဟာသထဲက အတုယူအားကျစရာများကို တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။
အားရပါးရ စိတ်လွတ် လက်လွတ် ရယ်မောကြပါ။ သင်ရယ်မောလျှင် ကျွန်ုပ်လဲ ရယ်မောပါမည်။ သင် ပျော်လျှင် ကျွန်ုပ်လဲ ပျော်ပါသည်။ ဒါကြောင့်မို့ သင်တို့ရော ကျွန်ုပ်ရော တူတူရယ်မောပြီး တူတူ ပျော်ကြပါစို့လား။ ။
အိပ်ရေးတွေ ပျက်ကုန်မယ်နော့။ အလုပ်လုပ်စရာ ရှိနေရင် ခဏလေးဆိုပြီး ဒီဖိုင်တွေကို မကြည့်မိစေပါနဲ့။ အချိန်တွေ စားမှန်းမသိ စားသွားပါလိမ့်မယ်။း)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:44 15 comments:
မှန်ပြူတင်းမှ ထိုးကျလာတဲ့ နေရောင်ခြည်ကြောင့် အိပ်ရာမှ နိုးလာသည်။ ညစဉ် ညဉ့်နက်နက် စာကြည့်တတ်သည်မို့ မနက်ခင်း၌ ဘယ်တော့မှ စောစောမထဖြစ်။ မနက်စောစော မိုးလင်းတတ်တဲ့ ရာသီရောက်နေပြီမို့ နေရောင်သည် ကျွန်ုပ်၏ နိုးစက်တစ်ခု ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေလေသည်။ မထချင်ပေမဲ့ ထရတော့မည်။ အလင်းရောင်တွေကြားထဲ ကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်း မအိပ်တတ်။ အိပ်ရာထပြီး မျက်နှာသစ်မယ်ကြံတော့ ရေက အစအနလေးတောင် မမြင်ရ။ အဲဒါမှ ပြဿနာ။
"မောင်ခွေးရေ... ရေမရှိတော့ဘူး။ ရေသွားခပ်ဦး"
အတူနေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို အကူအညီတောင်းသလိုလိုနဲ့ ရေရှာပုံတော် ထွက်ခိုင်းလိုက်သည်။
"ဟာ.. သူကြီးမင်းကလဲ.. ဒါ တုံးဖလားများ မှတ်နေလားဗျ။ ဒါ ဘိလပ်ဗျ ဘိလပ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရေသွားခပ်ရမှာတုန်းးး"
"ဘယ်က ခပ်ရမှာလဲ။ ရေတွင်းမှာ သွားခပ်ပေါ့။ ဒါများ ခက်တာမှတ်လို့"
"သူကြီးမင်း အိပ်ရေးမ၀သေးရင် ထပ်အိပ်လိုက်ဦး။ အိပ်မှုံစုံမွှားနဲ့။ တုံးဖလားက သူ့အိမ်များ မှတ်နေတယ်"
"ဟေ့ကောင် မောင်ခွေး စကားမများနဲ့။ ဘိလပ်မှာ ရေတွင်းတွေ ပေါမှပေါ။ မောရစ်ဆင် ရေတွင်း၊ တက်စ်ကို ရေတွင်း၊ စိန့်ဘူရီစ် ရေတွင်း၊ အက်ဇဒါ ရေတွင်း။ စုံနေတာဘဲ။ အဲဒီ ရေတွင်းတွေကနေ သွားခပ်"
"အော်... ဒါများ.... မောင်ခွေးရေ... ရေမလာဘူး။ ရေသန့်ဗူး သွားဝယ်ပေးပါဦး ဆိုလဲ ပြီးတဲ့ ဥစ္စာ။ ကပ်ရှုပ်နေသေးတယ်။ ခဏစောင့် ကျနော် သွားဝယ်ပေးမယ်"
ပါးစပ်က ပွစိပွစိ တိုးတိုးရေရွတ်ရင်း မောင်ခွေးတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ကားကလေးကို စက်နှိုးကာ မောရစ်ဆင်သို့ အပြေးသွားလေတော့၏။ ခဏအကြာတွင် ရေသန့်ဗူး အလုံး ၂၀ သယ်ယူလာပြီး....
"ကဲ..ကဲ... သူကြီးမင်းရေ... ဒီမှာ ရေသန့်ဗူးတွေ ရလာပြီ။ တော်သေးတယ်။ ဒီနေ့ လူတွေ ရေသန့်ဗူးဝယ်ဖို့ တန်းစီနေကြတာ။ ဟောင်းစလိုးဒေသတစ်ခုလုံး ရေပြတ်တောက်မှု ဖြစ်လို့တဲ့။ ဘယ့်နှယ် ကြား ကြားဖူးပေါင်။ ငခွေး လန်ဒန်ရောက်လာတာ ဆယ်စုနှစ် ၂ နှစ်နီးနီး ရှိနေပြီ။ တစ်ခါမှ အခုလို ရေပြတ်တောက်တာ မကြုံဖူးဘူး။ သူကြီးမင်းတို့ လန်ဒန်ရောက်လာမှဘဲ မကြုံဖူးတာတွေ ကြုံနေရတယ်။ နှစ်စဉ် နှင်းတွေနင်းကန်ကျပြီး လေယာဉ်ကွင်းတွေ ပိတ်လိုပိတ်ရ၊ ကားတွေ အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်လို ဖြစ်ရ၊ ဘိလပ် စီးပွါးရေးကပ်ဆိုးတွေ ကျရောက်လားကျရောက်ရ၊ စတာလင်ပေါင် ငွေကြေးတွေ နိမ့်ကျလား နိမ်ကျရ၊ မိုးခေါင်လား ခေါင်ရ၊ ရေကြီးလား ကြီးရ။ ဘာဆို ဘာမှ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အဲဒါ သူကြီးမင်းကြောင့် ဖြစ်ရတာ။ သူကြီးမင်း ဘိလပ်မရောက်ခင်ကဆို အားလုံး အိုကေမှာ စိုပြေနေတာဘဲ။ အခုတော့ အားလုံး ရှုပ်ထွေးကုန်လို့ ရွှေမြန်မာတွေ တစ်ဝက်လောက်တောင် ပြည်တော် ပြန်နေကြပြီ။ ကဲပါ ကဲပါ... အခု ဒီမှာ ရေသန့် ရောက်လာပြီ။ တကထဲ ဘုန်းရှင် ကံရှင် ကျနေတာဘဲ။ သူ့အလိုဘဲ လိုက်ဖြည့်ပေးနေရတယ်...."
စသဖြင့် စသဖြင့် ပြောဆို ညည်းညူနေလေ၏။ ကျွန်ုပ်သည်လဲ .... အင်း... မျက်နှာလေး တစ်ခါ သစ်ရဖို့အရေး... မောင်ခွေးရဲ့ အပြောအဆိုကို ရေရေလည်လည် ခံနေရပါလား... မဖြစ်ချေဖူး....ပြန်လည် ချေပ ဦးမှဘဲ ဟု စဉ်းစားကာ..
"မောင်ခွေးရေ... အဆိုးဘက်ကချည်း မကြည့်နဲ့လေကွာ။ ဒီလိုလေးလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးလေ။ ငါ ဘိလပ်ကို ရောက်ပြီးမှ နှစ်စဉ် နှင်းဖြူလွှာလေးတွေ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ခုန်ဆင်းလာတယ်။ ဒါဟာ လောကကို အဖြူရောင် ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ လွှမ်းခြုံပေးမဲ့ အတိတ်နိမိတ်လေကွာ။ ပြီးတော့ စတာလင်ပေါင်ဈေးတွေ ကျဆင်းလာတာလဲ ငါတို့ကျောင်းသားတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေတယ်လေ။ နို့မို့ဆို စတာင်တစ်ပေါင်ကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၅၀၀ ဆို မင်း တွက်သာ ကြည့်ပေတော့။ ကျောင်းစရိတ်ပေးရဖို့ မြန်မာငွေ ဘယ်လောက် ရင်းရမလဲလို့။ အခု စတာလင် တစ်ပေါင်မှ ၁၃၀၀ လောက်ဘဲ ရှိတော့တာလေ။ မကောင်းလား။ ပြီးတော့ မိုးခေါင် ရေကြီး ရာသီဥတုတွေ ဆိုးဝါးလာတာလဲ လောကရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်လာအောင် သဘာဝတရားက ဘိလပ်သားတွေကို ပြသပေးတာလေ။ ဥပမာ အခု ရေမလားဘူး မဟုတ်လား။ ရေမလာတော့ ရေရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုနားလည်လာမယ်။ မိဘတွေနဲ့ ဝေးနေတဲ့အခါ ဒါမှ မဟုတ် မိဘတွေ သေဆုံးပြီးတဲ့ အခါကျမှ မိဘမေတ္တာကို ပိုနားလည်လာရသလိုမျိုးပေါ့။ အခု ဘိလပ်သားတွေ ရေရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်သွားပြီ။ ရေမရှိလို့ မဖြစ်ဖူးဆိုပြီးတော့လေ။ လူဆိုတာမျိုးက လိုအပ်တာတွေအဆင်သင့် ရနေရင်၊ ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေရင်၊ ရချင်တာတွေ လွယ်လွယ်နဲ့ ရနေရင် တန်ဖိုး မထားတတ်ကြဘူး မဟုတ်လား။ ကဲ..မောင်ခွေးရ.... ဒီလိုလေး စဉ်းစားလိုက်တော့ အမြင်တွေ ကောင်းမနေဘူးလား။ နောက်ပြီး စကားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ငါ ဘိလပ်ရောက်ပြီး နောက်မှ အနောက်တိုင်းက ခေါင်းဆောင်တွေ ရွှေမြန်မာကို စိတ်ပိုဝင်စားလာပြီး တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ သွားရောက်ကြလို့ ရွှေမြန်မာကြီးလဲ တိုးတက်မှုတွေ ဒလဗုံ ဒလခေါင်း ဖြစ်နေပြီ မဟုတ်လား...."
ဟု.. မမောမပန်း မောင်ခွေးကို စကားနိုင်ရရေး မနက်စောစော ဥဒေတယံ ဂါထာကို မရွတ်ဖတ်အားဘဲ စကားပိုတွေကိုသာ ပါးစပ်က အမြှုပ်ထွက်လုခမန်း ရမ်းသန်း ပြောနေရတော့၏။ မောင်ခွေးကလဲ ခေသူ မဟုတ်။
"မစပ်မှ မဆိုင် သူကြီးမင်းရာ... စမ္ပါနဂိုရ်က နွားမပေါင်ကျိုးတာနဲ့ ညောင်ဦးကမ်းပါးပြိုရရိုးလား။ အမှန်က သူကြီးမင်း ရွှေမြန်မာမှာ မရှိလို့သာ ရွှေမြန်မာကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာ။ တကယ်လို့သာ အခု သူကြီးမင်း ရွှေမြန်မာ ပြန်သွားကြည့်။ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုဘယ်လို ဖြစ်ကုန်မလဲ ဆိုတာ အဖြေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အခု ကြည့်။ သူကြီးမင်း သယ်ယူလာတဲ့ အကုသိုလ်တွေကို ဘိလပ်သားတွေ အလူးအလဲ ခံနေရရှာတယ်.. သွပ်...သွပ်...သွပ်။ သနားလိုက်တာ။ သနားတာက သူကြီးမင်းကို မဟုတ်ဖူးနော်။ ဘိလတ်သူ ဘိလတ်သားတွေကို သနားတာ...."
"ကဲပါ...မောင်ခွေးရာ... စောစောစီးစီး သမ္ဖပ္ပလာပတွေ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ငါမျက်နှာ သစ်လိုက်ဦးမယ်။ အား ပါး ပါး.. မင်းခပ်လာတဲ့ ရေလေးက ကြည်အေးနေတာဘဲ။ ဒီလိုလေးအသုံးဝင်နေလို့ မင့်ကို အားကိုးနေရတာ။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ"
မျက်နှာသစ်ပြီး မောင်ခွေးရဲ့ စကားကို ပြန်စဉ်းစားနေမိသည်။ သူပြောတာလဲ ခပ်ဟုတ်ဟုတ်။ ဘိလပ်ကို ကျွန်ုပ်ရောက်လာပြီးနောက် ဖြစ်ပျက်လိုက်ကြတဲ့ နက်ဂတစ်တွေ အများသား။ တော့တင်ဟမ်ကုတ်နား တစ်ဝိုက် ဆူပူသောင်းကျန်းမှု မီးရှို့မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့လား ဖြစ်ခဲ့ရ၊ ပြည်တွင်းကျောင်းသားတွေ ကျူရှင်ကြေး သုံးဆလောက် တက်လား တက်ခဲ့ရ၊ စီးပွါးရေးတွေ ကမောက်ကမဖြစ်လား ဖြစ်ရနဲ့။ အခုလဲ ကြည့်ဦး စကော့တလန်ဘက် ဝေးလ်စ်ဘက်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာပြီး ရေကြီးမှု သတိပေးနေချိန်မှာ အင်္ဂလန်နယ်နိမိတ် အတော်များများ မိုးခေါင်နေတဲ့အတွက် ရေကို ချွေတာသုံးကြရန် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားရလေသည်။ အော်.... မောင်ခွေးပြောသလိုများ ဖြစ်နေလေရော့သလား မသိ။း)
ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာ တစ်ခုခု ပြတ်တောက်မှုနဲ့ ကြုံရင် ဒီအတိုင်းတော့ မနေ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေကို အသိပေးရမည်ဟု စဉ်းစားကာ ကွန်ပျူတာဖွင့်ကာ အင်တာနက်ထဲ ရွက်လွှင့်ပြီး မျက်လုံးဝင့်ရှာကြည့်လေရာ အောက်ပါ လင့်ခ်ကလေးအား တွေ့လိုက်ရလေတော့သည်။ http://www.hounslowchronicle.co.uk/west-london-news/local-hounslow-news/2012/05/02/burst-pipe-leaves-35-000-homes-without-water-109642-30884855/
"ရေပိုက်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး ဟောင်းစလိုးဒေသတစ်ဝိုက်ရှိ အိမ်ခြေ သုံးသောင်းခွဲလောက် ရေပြတ်လပ်မှု ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိနေပါသည်" တဲ့။ ရေပြတ်လပ်မှုကြောင့် ကျောင်း ၁၈ ကျောင်းတောင် ပိတ်ထားရတယ် ဆိုပါလား။ ကျွန်ုပ်သည်လဲ မစပ်မှ မဆိုင် ကျွန်ုပ်တက်နေတဲ့ ကျောင်း ပိတ်မပိတ် စုံစမ်းကြည့်လေရာ ညောင်ဦးကမ်းပါးပြိုတိုင်း စမ္ပါနဂိုရ်က နွားမ ပေါင်းကျိုး မနေမှန်း အဖြေသိရလေတော့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ရေပြတ်လပ်မှုကြောင့် ဟောင်းစလိုးဒေသက မူကြိုကျောင်း မူလတန်းကျောင်းလေးများ ပိတ်လိုက်ရသည်ကို အခွင့်အရေးယူကာ ကျွန်ုပ်သည်လဲ ကြီးတောင့်ကြီးမားနဲ့ ဟောင်းစလိုးဒေသ ရေပြတ်တောက်မှုကို အခွင့်အရေးယူကာ ယနေ့တက်ရမဲ့ကျောင်းကို ကျေးပြောင်းပြီး ကျောင်းပြေးကာ ဤပို့စ်လေးကို အားရပါးရ ရေးသားလိုက်ရပေတော့သတည်း။ ။
ရေပြတ်လပ်မှု နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ???
ဒီနေရာလေးမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ တစ်နှစ်ပြည့်မှာ နှစ်ရက်ဘဲ လိုတော့တဲ့ မနှစ်က ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:26 14 comments: